Izodingidwa ngomhlaka-22 Febhuwari eyokungabethembi ubuholi bukaZuma | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 19:30
Izodingidwa ngomhlaka-22 Febhuwari eyokungabethembi ubuholi bukaZuma
Cape Town - Isicelo se-Economic Freedom Fighters sokuthi kudingidwe ngokungathenjwa kobuholi bukaMengameli Jacob Zuma sihlelelwe umhlaka-22 Febhuwari, ngelanga elilandela iBudget Speech.
Izikhulu zePhalamende ngoLwesine ziveze ukuthi zisinqabile isicelo se-EFF sokuthi lolu daba ludingidwe ngesonto elizayo ngaphambi kwenkulumo ebhekiswe esizweni.
Bathi iState of the Nation Address (SONA) izoqhubeka njengoba kuhleliwe.
IPhalamende ngoLwesihlanu linikeze izizathu zokuthi kungani lolu daba luzodingidwa ngemuva kwenkulumo yokuvula iPhalamendme kanye nangemuva kwenkulumo yesabelomali kaNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba.
OLUNYE UDABA: Kuhlehliswe usuku lokuvota ngesiphakamiso sokungethenjwa kobuholi bukaZuma
Lesi sinqumo sithathwe ngemuva kokubuka izinhlelo eziningi iPhalamende elimatasa ngazo, okubalwa i-SONA, inkulumpikiswano nge-SONA, ukuphendula kukamengameli kanye neBudget Speech ngomhlaka-21 Febhuwari.
"UBaleka Mbete naye uxhumanile nezinhlaka ezithintekayo," kusho okhulumela iPhalamende uMoloto Mothapo.
I-EFF ngoLwesine ithe ilungiselela ukuzwakalisa izimfuno zayo ngoZuma kwi-SONA ngoLwesine oluzayo, ngomhlaka-8 Febhuwari, ithembisa ngokuthi kungenzeka ukuthi kuphazamiseke uhlelo.
Khonamanjalo, iDemocratic Alliance izophinde inxuse uMbete ukuba ahlehlise i-SONA, yize iPhalamende lisihlabile isicelo isicelo seqembu sokuqala.
Lokhu kulandela ukuthi i-DA icele ukuba ihlehliswe i-SONA kuze kube uZuma uyashenxa esikhundleni.